प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी, के निर्णय गर्ला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी, के निर्णय गर्ला ?
प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी, के निर्णय गर्ला ?
पुस ७ गते, २०७७ - १३:३५
काठमाडौँ । नेपाल कम्युष्टि पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक चलिहेको छ ।
बबर महलमा जारी स्थायी कमिटी बैठक लगत्तै त्यहीँ ठाउँमा यो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । बैठकले ओली समूहलाई कारबाहीको औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ । यस्तै, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले थप रणनीति तय जारी स्थायी कमिटी बैठकबाट गर्ने भएको छ ।
पुस ७ गते, २०७७ - १३:३५ मा प्रकाशित